Somalia: Ciidamo Ajnebi ah oo Shabeelada Hoose hawlgal ka fuliyey habeenkii Arbacada - Wargane News
Home Somali News Somalia: Ciidamo Ajnebi ah oo Shabeelada Hoose hawlgal ka fuliyey habeenkii Arbacada
Ciidamo aan la garan ilaa hadda haybtooda ayaa habeenkii xalay weerar ka fuliyey degmada Aw-dheegle ee gobolka Shabeelada Hoose.
Afhayeenka arrimaha ciidamada ee al-Shabaab ninka la baxay Cabdicasiis Abu Muscab ayaa sheegey in koox ajnebi ah oo watey laba diyaaradood ay soo weerareen habeenkii xalay degmada Awdheegle, halkaas oo ay dagaal kula galeen ciidan ka tirsan al-Shabaab.
Afhayeenka al-Shabaab ayaa sheegay in koxoda soo weerartey ay gudaha u soo galeen Aw-dheegle, halkaasna ay kala kulmeen dagaal qaatey muddo saacad ku dhaw.
Abu-muscab ayaa sheegay in ay garan waayeen afka ay kuwada hadlayeen kuwa soo weeraray isla markaana wejigu u duubnaa. Wuxuu sheegtey in ay si weyn isaga caabiyeen oo fashiliyeen weerarkaas, sidaas wuxuu u sheegey raadiyaha al-Shabaab ee Andulus.
Dhanka kale Guddoomiyaha Dowladda ugu magacaaban degmada Awdheegle Maxamed Aweys Mad-yarow ayaa warbaahinta u xaqiijiyey weerarkaas, wuxuuna sheegay in lagu diley 11 ka mid ah al-Shabaab.
Ilaa hadda ma jirto Dowlad sheegatey weerarkaas in ay qaadey, waxaa loo badinayo weerarku in uu ahaa mid la doonaayey in lagu soo furto maxaabiis al-Shabaab haysato, kuwaas oo aan ilaa hadda la ogeyn dalka ay u dhasheen.
Sanadkii 2013 ayaa weerar kan u eg waxaa degmada Buulo Mareer gobolka Shabeelada Hoose ka fuliyey Kumaandooska Faransiiska, kaas oo ay doonayeen in ay ku furtaan nij ka tirsanaa sirdoonka Faransiiska oo al-Shabaab Muqdisho ka afduubteen. Weerarkaas ayaa fashil ku dhamaadey.